चुनावपछि प्रधानमन्त्रीका लागि हामीसँग एक से एक दावेदार तयार छन्- देउवा - हिमाल दैनिक
चुनावपछि प्रधानमन्त्रीका लागि हामीसँग एक से एक दावेदार तयार छन्- देउवा
१८ मंसिर २०७४, सोमबार ०५:१५
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हतारोमा थिए तर मुहारमा प्रसन्नता थियो । वाकपटुता देउवाको शक्ति आधार होइन । उनी छोटो र सूत्रमा कुरा गर्न रुचाउँछन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाझैं । त्यसमाथि निर्वाचनको मौन अवधि नजिकै आइसकेको सन्दर्भमा देउवा बढीभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्थे । त्यसैले मंसिर १७ गते धनगढीमा हामीले उनलाई सीधै विषय प्रवेश गराउने प्रश्नबाट संवादको थालनी गर्‍यौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अन्नपूर्णका लागि विजयकुमारले गरेको विशेष वार्ता-
दोस्रो चरणको मतदान नजिक आउँदै गर्दा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
ठूलो सन्तोषको अनुभव गर्दै छु । हामीले जुन संविधान बनायौं, यो एक समावेशी संविधान हो । यसमा मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति आदि सबैलाई आरक्षण दिइएको छ । हाम्रो यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पूरा हुँदै छ । यसका साथै नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको युग सफलतापूर्वक रूपान्तरण हुँदै छ ।
केही समय अगाडिसम्म ‘देउवाले चुनाव गराउँदैनन्, गराउन सक्दैनन्, चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्दै छन्, अयोग्य हुन्’ भन्नेहरू पनि थिए । निर्वाचन साँच्चिकै नभएको भए अपजसको भार तपाइँलाई बोकाइने थियो । तर, आज दूरगामी महत्वका निर्वाचनहरू सम्पन्न गराएको स्वाभाविक जस पनि तपाइँलाई दिन कन्जुसी भएको जस्तो लाग्दैन ?
हेर्नुस्, जस अपजसका लागि काम गरेको होइन तर पनि अलिकति दुःख लाग्छ । निर्वाचन गराउँदै छ भन्ने पूरापूर थाहा भएका विपक्षी नेताले समेत ‘शेरबहादुर चुनाव सार्दै छ’ भन्ने झुटा प्रचार गर्दै हिँडे । इतिहासले मूल्यांकन गर्ला, गणतान्त्रिक नेपालको संक्रमणकाल समाप्त गर्ने निर्वाचनहरू कसले गरायो । हुन त यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन । २००७, २०४६, २०६२÷६३ का सबै परिवर्तनहरू हाम्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णायक भूमिका गरेपछि भएका त हुन् । अहिलेको घटना पनि त्यसै ऐतिहासिक शृंखलाको नयाँ अध्याय हो । अब नेपाल कसैले खोस्न नसक्ने लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ।
मिडियासँग कुनै गुनासो छ ?
छैन । डेमोक्रेसी हो । लागेको विरोध गर्न पाइन्छ । तर, विरोध सही नभए इतिहासले त्यसलाई पखालिदिन्छ ।
कांग्रेसलगायत नेपालका अन्य ठूला दलहरू संघर्ष गर्न सक्ने तर सत्तामा पुगेपछि ‘डेलिभरी’ चाहिँ गर्न नसक्ने रूपमा पनि चित्रित छन् । कुनै टिप्पणी ?
(अलि झर्कंदै) कसले भन्यो कांग्रेसले डेलिभरी गरेन भनेर । अहिले जसरी संविधान अब पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ, के त्यो डेलिभरी होइन ? यो भन्दा ठूलो डेलिभरी के हुन्छ ? तपाइँ हिजो साँझ काठमाडौंबाट आएर अहिले बिहान अन्तर्वार्ता गरेर आजै दिउँसो काठमाडैाँ फर्कनुहुन्छ । हवाई क्षेत्रको विकास नभएको भए यो सम्भव थियो ? कसले गर्‍यो हवाई नीतिमा परिवर्तन ? थाहा छ तपाइँलाई बाटो घाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, विभिन्न सेवा यी सबै क्षेत्रमा यसकारण विकास सम्भव भयो किनभने उदारीकरणको नीति हामीले ल्यायौं ।
होइन भने आज त्यही एउटा आरएनएसीको टिकट लाइनमा हुनुहुन्थ्यो तपाइँ । यतिका टिभी, रेडियो, अखबार कहाँबाट आए ? आकाशबाट झरेका त होइनन् । हाम्रै उदार नीतिका परिणाम हुन् । यही राजमार्गका २२ वटा पुल कसले बनायो, हाम्रो पालामा बनेको होइन ? हो, राजनीति ट्र्याकमा नभएकाले गर्नुपर्ने जति सकिएन । बीचैमा माओवादीले हिंसा नमच्चाएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो । अब हुन्छ विकास । हेर्दै जानुस् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न तपाइँको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे कुनै टिप्पणी ?
सुरुमा त मैले यस विषयमा कुरा अलि बुझ्या थिइनँ । पछि बुझ्दै जाँदा उहाँका कतिपय भनाइ ठीक लाग्यो ।
अहिले निर्वाचनको दौरानमा भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नियन्त्रण गर्न किन सकिएको छैन ?
नियन्त्रण त भइराख्या छ नि ! बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा कोही न कोही यस्तै तत्व सधैँ आइराख्छ । कहिले के नाममा, कहिले के नाममा । अब चुनाव पछि सर्वदलीय सहमति गरेर एउटा फैसलामा पुग्नै पर्छ, यस्ता गतिविधिको सामना कसरी गर्ने । कि बार्ता गर्नु पर्‍यो कि मुकाबिला ।
कुन-कुन विषयमा नेपालमा अब सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ ?
पहिलो, हिंसा हत्याका विषयमा ।
विदेश नीतिको मामिलामा ?
विदेश नीतिका सम्बन्धमा मेरो प्रस्ट धारणा छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालीको हित केमा छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला परिभाषित हुनुपर्छ । भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा छ । यसबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रहरू पनि छन् ।
भारत र चीन दुवैलाई नेपालले किन साँचो अर्थमा आश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन ?
आश्वस्त पार्नुपर्छ । अर्को कुनै बाटो नै छैन । मलाई लाग्छ, यस विषयमा पनि अब नेपालका राजनीतिक दलबीच साँचो अर्थको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।
के आजको दिनमा छिमेकी राष्ट्र हामीसँग पूरा ढुक्क छैनन् ?
त्यसरी भन्नुभन्दा, उनीहरूलाई अझ बढी आश्वस्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ भन्दा राम्रो हुन्छ ।
नेपालको विदेश नीति स्थिर नभईकन नेपालको लोकतन्त्र पनि अस्थिर नै रहने खतरा छ भनेर कसैले भन्यो भने ?
मैले तपाइँलाई भनिसकेँ नि ! देशभित्र आन्तरिक सहमति भएपछि यो प्रश्नको जवाफ स्वतः प्राप्त हुनेछ । सुरुवात आफैंबाट गरौं । सहमतिको सुरुवात देशभित्रै गरौं । अनि छिमेकीहरूसँग कुरा गरौंला।
पछिल्लो समयमा प्रचण्डजीसँग तपाइँका सम्बन्धमा धेरै उतार चढाव आयो । त्यसले गर्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको तराजु नै हल्लिएको अवस्था छ अहिले । कुनै टिप्पणी ?
तराजु साँच्चिकै हल्लिएको हो कि हाललाई मात्र त्यस्तो देखिएको हो, अहिल्यै भन्न सकिन्न । प्रचण्डजीको व्यवहारका विषयमा म अहिल्यै धेरै बोल्न चाहन्नँ । मलाई आश्चर्य लाग्या छ । उहाँले अचानक कुरा फेर्नु भो ।
नवगठित वाम गठबन्धनबारे तपाइँको टिप्पणी ?
त्यसको भित्री उद्देश्य अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट किन अचानक एक भए ? हिजो किन भएनन् ? एकाएक किन भए ? भित्री डिजाइन के छ ? केही समयपछि स्थिति स्पष्ट होला । अनि टिप्पणी गरौंला ।
किन ? उनीहरू एकठाम आए राम्रो होइन र ? राजनीतिक स्पष्टताका लागि ?
(हाँस्दै ) कम्युनिस्टलाई उसको बोलाइबाट होइन काम गराइबाट मात्र नाप्नुपर्छ । भोलि उनीहरू कसरी जान्छन् त्यो हेर्नुपर्छ । उनीहरू राष्ट्रपतीय पद्धति ल्याउनुपर्छ भनिराखेका छन् । हाम्रो संविधान समावेशी छ । मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, आदिवासी, थारू आदिका लागि आरक्षण छ । एकै जनाको हातमा यत्रो शासन दिने व्यवस्था र संविधानका मर्म एकैसाथ जान सक्छन् र ? सुन्दा मीठो लागे पनि नेपालजस्तो विविधताको देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली थाम्न सकिन्छ कि सकिन्न ? जटिल समाज छ हाम्रो । समावेशिता यो संविधानको आत्मा हो । त्यसलाई असर गर्नु भनेको यो संविधान च्यात्नुसरह हो ।
तपाइँ अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्नुहुन्छ । ओलीजीले ‘म लोकतन्त्रका लागि त्यति लडेको मान्छे, कसरी ल्याउँला ? ’ भनेर जवाफ दिनुभयो …
ओलीजीको लडाइँ लोकतन्त्रका लागि थियो कि कम्युनिस्ट शासनका लागि भन्ने कुरा आउने दिनले फैसला गर्नेछ । होइन भने उहाँहरू संविधान संशोधनको कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?
तपाइँ भन्दै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिले अन्ततः नेपाललाई अधिनायकवादतिर लिएर जान्छ?
हो । लेखेर राख्नुस्- नेपालजस्तो विविधताले भरिएको देशमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई त्यागियो भने अकल्पनीय दुर्घटना हुनेछ । यो नेपाल पुरानो नेपाल होइन । अधिनायकवादकै सम्बन्धमा अर्को कुरा- उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी किन राख्नुपर्‍यो ? कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै अधिनायकवादलाई जनाउँछ भन्ने बच्चा-बच्चालाई थाहा छ ।
ओलीजीले मलाई केही दिनअघि भनिसक्नु भो ‘वस्तुतः यो कम्युनिस्ट गठबन्धन पनि होइन वामपन्थी गठबन्धन पनि होइन ।’त्यसो हो भने पार्टीको नाम फेर्नुपर्‍यो । कसलाई मूर्ख बनाएको ? कम्युनिस्ट देशमा पनि चुनाव हुन्छ र ? म कांग्रेस हुँ । गर्व गर्छु कांग्रेसी भएकोमा । उहाँहरूले पनि आफू कम्युनिस्ट भएकोमा गर्व गर्नुपर्‍यो नि !
चुनाव परिणाम कस्तो आउला भनेर अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
म ढुक्क छु । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ ।
तपाइँको पार्टी बहुमतमा आए प्रधानमन्त्री को हुनेछ ?
हामीसँग एक से एक दावेदार तयार छन् ।
Prevपछिल्लोचुनाब प्रचारको अन्तिम दिनः यस्तो छ शीर्ष नेताहरुको कार्यतालिका
अघिल्लोपीडितलाई थाहै नदिई सहमति गरेको भन्दै बाँदरमुँढेका पीडित माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग आक्रोसितNext